त्यो प्रश्न: तर म किन यो पुस्तक पढ्दै छु? | वर्तमान साहित्य
त्यो प्रश्न: तर म किन यो पुस्तक पढ्दै छु?
म किन पढ्दै छु?
हामीले त्यो पुस्तक सुरु गर्यौं किनभने यसले हामीलाई आकर्षित गर्दछ। किनभने यो छ उत्कृष्ट समीक्षा बौद्धिक आलोचकहरूको। किनभने यो हाम्रो मनपर्ने लेखक को एक हो। «उग, फुलनिटोको अन्तिम, सबैभन्दा धेरै! यो असफल हुन सक्दैन, "हामी आफैंलाई भन्छौं। किनभने सबै भन्दा बढी बेचिएको छ र हामी विश्वास गर्दछ बिक्री को एक धेरै सूचि। किनभने Nos यो एक मित्र द्वारा सिफारिस गरीएको थियो, उहाँ द्वारा टाढा, र उहाँ हाम्रो प्राण साथी हुनुहुन्छ र हामी उनको उत्साह बाँड्न चाहन्छौं।
जे भए पनि, के हामीले सुरु गर्यौं। दिन बित्यो, पढ्नुहोस् ... हाम्रो दैनिक वास्तविकता शान्त छ, समयको अभाव र केही साना समस्याहरू नभई शान्त हो। र अचानक, भावना आउँछ। «तर म यस किताबको साथ नराम्रो समय बितिरहेछु। म यो पढिरहेको छु के हो? »। होशियार रहनुहोस्, यो खराब छैन भनेर होइन, यो हो कि हामीले पढेको कुरासँगै धेरै नराम्रो समय बिताइरहेका छौं। तर हामीसँग सामर्थ्य छ र हामी यसलाई समाप्त गर्दछौं। किन? तपाईलाई के भएको छ? के तपाईंले तिनीहरूलाई छोड्नुभयो? हेरौं ...
यो मलाई धेरै पटक भएको छैन। साथै, साधारण कुरा जब कुनै चीजले तपाईंलाई असजिलो महसुस गराउँछ भने यसलाई छोड्नु हो। जोडीको साथ जुन म सम्झन्छु मसँग एकदम खराब समय थियो। तैपनि, म तिनीहरूलाई समाप्त गर्न व्यवस्थित गर्दछु, यद्यपि मैले स्वीकार गर्नुपर्दछ कि मैले पृष्ठ र पृष्ठहरूको पृष्ठ छाडें। हामी सबैलाई थाहा छ कि यो राम्रो संकेत होईन।
मुद्दा उनीहरूले ममा उत्पन्न बेचैनी थियो। उनीहरूले के भने र उनीहरूले कसरी भने भनि कठोरता र कच्चापन। हामीले परिस्थितिहरू पनि ध्यानमा राख्नुपर्दछ जसमा हामीले केही पुस्तकहरू र ती कुञ्जीहरू पढ्छौं जुन तिनीहरूले हामीसँग पाउन सक्ने सबैभन्दा गहिरो, मोडिएको र बिरामी भित्री भाग गर्न प्रबन्ध गर्छन्। र त्यो पनि एक योग्यता हो। यहाँ ती जोडी शीर्षकहरू छन्।
1 उपकारी (२००)) - जोनाथन लिट्टेल
2 राजमार्ग किलर (२०० 2008) - जेम्स एलोरोइ
उपकारी (२००)) - जोनाथन लिट्टेल
यस लेखकबाट म यो उपन्यास समाप्त गरे पछि बढी पढ्न चाहन्न, पक्कै पनि उनीसँग रहेको सबैभन्दा बढी मान्यता छ। तर निस्सन्देह, यो दोस्रो विश्वयुद्ध थियो, एक व्यक्तिगत कमजोरी। जे भए पनि, मेरो आँखा टाढा गए। मैले धेरै याद गरे
जब कसैले सेमियोटिक्समा लगभग कुनै उपचारको मिश्रण गर्दछ, एक धेरै विचलित र डिस्टर्ब गर्ने पूर्व एसएस अफिसर, होलोकास्ट, पूर्वी मोर्चा र एक अविवाहित सम्बन्ध, गर्नु पर्ने बुद्धिमानी कुरा भनेको साहस जुटाउनु हो। यदि हामीले आलोचकहरूको फ्लोरिड परिभाषालाई "कल्ट शीर्षक", "वर्षको उपन्यास", "असाधारण खोज", इत्यादि भनेर जोड्यौं भने, सबैभन्दा बुद्धिमानी कुरा अझै काम्न थाल्नु पर्छ। हो, कहिलेकाँही तपाईलाई थाहा हुँदैन तपाई कहाँ हुनुहुन्छ भनेर, तर मैले गरे। पक्कै पनि यो दायित्व थिएन।
यस पुस्तकको मनमोहक शक्ति यसको दिखावाको समानुपातिक छ। र यदि तपाईं यसको हजारौं पृष्ठमा अनन्त अध्यायहरू पढ्नुहुन्छ भने, केहि बुँदाहरू र केही अंशहरूमा, जुन काकेशियाली भाषाहरूको सेमोटिक्समा ग्रन्थ छ, तपाईं यो निष्कर्षमा पुग्नुहुन्छ कि यो केवल घमण्डको कारणले हो।
वर्ण, संरचना र सामग्री को जटिलता अत्यधिक ग्राफिक विवरण मा स्किम्प छैन। पनि वा सैन्य jargon बीचमा एस्चेटोलोजी। त्यसोभए यो चुनौती बन्छ। यो पागल, साइकोपैथिक हरामी मेरो लागि सक्षम हुन गइरहेको छैन। र, चमत्कार, तपाईं यसलाई समाप्त गर्नुहोस्। हुनसक्छ यो अन्त्य जान्नु मात्र हुन्छ। र यसका लागि, लेखकले दुई गोल गरे: त्यो एक उसले पाठकहरूको केही पनि मतलब गर्दैन। र दुई: के धेरै पुरानो चाल, सबैभन्दा मोडिएको मोर्बिड प्रयोग गर्दछ पठनबाट उत्पन्न छविहरू पुन: सिर्जना गरेर, विशेष रूपमा सबैभन्दा असहज परिच्छेदहरूको।
अजीब पढाई ...
राजमार्ग किलर (२०० 2008) - जेम्स एलोरोइ
र के को बारेमा सान्त्वना Ellroy पढ्दै हुनुहुन्छ? कसैको लागि यो एक प्रतिभा हो, अरूका लागि यो असहनीय हुन्छ, सबैका लागि यो जटिल छ। धेरैजसो पुस्तकहरू एक वा दुई पढ्न सक्षम छन्। हामी मध्ये केहीले हामी सबैलाई धूम्रपान गर्यौं। Ellroy आधा उपाय होईन, सजिलो भन्दा टाढा। राजमार्ग हत्यारा यो पचाउनको लागि कम से कम सजिलो मध्ये एक हो.
सबैभन्दा बर्बर र क्रूर हिंसाको मनोरञ्जनमा यसको पूर्ण कच्चाईका लागि। र ती मध्ये एक चरित्र छ कि मोहित साथ साथ डराउने। यसको शुद्ध रूप मा दुष्टको मनोरन्जन जुन (सायद यो नै सबैभन्दा डरलाग्दो हो) वास्तविक दुष्टतामा आधारित छ जुन फिक्शनले पार गर्छ। यस अवस्थामा, यो आत्मकथा हो कि निर्दयी र क्रूर सिरियल किलरले उनलाई जेलमा हाल्दा लेख्ने निर्णय गर्दछ। क) हो, पहिलो व्यक्तिमा वर्णन गरिएको, हामी संयुक्त राज्य अमेरिका हुँदै नरकको यात्रामा जान्छौं जहाँ हामी सबैभन्दा जघन्य अपराधहरू देख्छौं त्यो बिना रोकिन्छ।
त्यो भावना मैले कुरा गरिरहेको थिएँ मसँग एक बिन्दुमा यो एकदम जीवन्त थियो मैले यो उपन्यास पढेको समयदेखि नै। मैले अ taught्ग्रेजी पढाउँथे र हप्ताको दुई चोटि नौ वर्षीया केटीको घरमा गएँ सलामन्का जिल्लाको सबैभन्दा उत्तम म्याड्रिडमा.
ठीक छ, मेट्रो सवारीमा म यो उपन्यास पढ्दै थिएँ। यो ठीक थियो ती मध्ये एक घर फिर्ता ती राम्रा कक्षा मध्ये एक पछि जब अचानक मेरो पढ्ने दृश्य गयो। मलाई थाहा छ यो ती अचम्मका अंशहरू मध्ये एक थियो कच्चा र एनेस्थेसिया बिना, Ellroy को विशेषता। प्रश्न तुरुन्त थियो। म यो के पढिरहेको छु?
यो उत्तर दिन सजिलो छ: यो वास्तविक दैनिक जीवनको विरोधाभास हो साहित्यको महान ईन्कोसिभेटिव शक्तिसँग। यी प्रश्नहरू हामीलाई दिन प्रति एकदमै कठोर, निराशाजनक र क्रूर वास्तविकताबाट आक्रमण गर्दछ। तर हामी त्यो गर्न को लागी प्रयोग गर्यौं। त्यसो भए, तिनीहरू असहज वा गाह्रो पठनमा भए पनि, फेरि साहित्य हामी त्यो भावनाहरु पाउँदछौं र स्वीकार गर्न सक्छौं भन्ने सम्झन यसको सार देखाउँदछ। समेत सबैभन्दा खराब समय संग.
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » साहित्य » किताबहरु » त्यो प्रश्न: तर म किन यो पुस्तक पढ्दै छु?
मेरो बानी आलोचना, साहित्यिक पुरस्कार वा ब्लगहरूमा विश्वास गर्ने होइन, बरु मेरो अन्तर्ज्ञानमा। र ईमानदारीपूर्वक लोरेन्जो सिल्भाको नवीनतम पुस्तक "बिच्छेहरूको देश" बाट मलाई असफल भयो। मैले यसलाई पृष्ठ 50० मा छोडे। किन यदि तपाईले à० p carryg बोक्ने किताब। यसले तपाईंलाई आकर्षित गर्दैन, तपाईं यसलाई अर्कोको लागि राम्रोसँग बन्द गर्नुहुन्छ, मसँग रहेको अन्तहीन सूचीको तुलनामा, म समय बर्बाद गर्न सक्दिन।
बधाई मारियोला र यस ब्लगको लागि धन्यवाद (र अधिक धेरै चीजहरूको लागि)
तपाइँको टिप्पणी को लागी धन्यवाद, Araceli।
राम्रो वाइन पिए र एउटा कथा पढ्नुहोस्, १ मा २